China Steel U Channel ASTM a36 YeAustralia fekitori nevagadziri |Zhanzhi
Steel channel isimbi yakatsetseka ine groove-shaped cross section.Simbi chiteshi isimbi yekabhoni yekuvaka uye muchina, uye chikamu chesimbi chine yakaoma muchinjiko-chikamu.simbi chiteshi inonyanya kushandiswa mukuvaka dhizaini, keteni madziro einjiniya, michina michina uye kugadzira mota, nezvimwe.
Iyo raw material billet yekugadzira simbi chiteshi kabhoni yakasungwa simbi kana yakaderera alloy simbi billet ine kabhoni yemukati isingapfuure 0.25%.Iyo yakapedzwa simbi chiteshi inounzwa nekupisa kushanda, normalizing kana kupisa kupisa.
1) Giredhi: A36
2) Dimensions: 5 # ~ ​​40 #, customized
Iyo simbi chiteshi ine yakanaka welding uye riveting zvivakwa uye yakazara ma mechanical zvivakwa.
chiteshi chesimbi chakakamurwa kuita chakajairika simbi chiteshi uye chiedza chesimbi chiteshi.Iyo inotsanangurwa yekupisa yakakungurutswa yakajairika simbi chiteshi ndeye 5-40 #.Madimikira ekupisa-akakungurutswa akajairwa simbi chiteshi anopihwa nemutengesi uye anodiwa ari 6.5-30 #.
Zvinotaurwa nesimbi chiteshi zvinonyanya kuratidzwa nehupamhi (H), gumbo upamhi (B), chiuno ukobvu (D), etc. Parizvino, zvinotsanangurwa zvemukati simbi chiteshi kubva No.5-40, ndiko kuti, rinoenderana kureba - 5-40 cm.Pasi pehurefu hwakafanana, chiteshi chesimbi chakareruka chine makumbo matete, chiuno chitete uye uremu hwakareruka kupfuura chiteshi chesimbi chakajairwa.No.18-40 inzira huru yesimbi, uye No.5-16 inzira yesimbi yepakati.
Simbi chiteshi inonyanya kushandiswa mukuvaka zvivakwa, kugadzira mota uye zvimwe zvimiro zveindasitiri, uye inowanzoshandiswa pamwe chete neI-matanda.Mukushandisa, zvinodikanwa kuve nezvakanaka welding uye riveting zvivakwa uye yakazara ma mechanical properties.Maererano nedzidziso yekugadzirwa kwesimbi, inofanirwa kunge iri bapiro rebapiro resimbi chiteshi, kureva kuti, chiteshi chesimbi chinofanira kumira, kwete kunyepa.Pasi pemamiriro ekusagadzikana kwemaitiro kushushikana kana kuderera kushushikana kwenhengo, simbi chiteshi inogona kushandiswa.;Kana mupendero wakasimbiswa uye kumusoro kwakanaka, zvakanyanya kukodzera kusarudza chiteshi chesimbi.